December 2009 | သူတို့ ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်းရသော
၆ ထပ်ကွေ့ လို့အများခေါ်တဲ့ တောင်တက်လမ်း အဆင့်ဆင့် အပိုင်းက နာမည်ကြီးပါ။ ရန်သူနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့မှုလေးတွေ ဖြစ်ပွားတတ်၊ မိုင်းဖြစ်စဉ်လေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ လမ်းကင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တပ်တွေ အထူးသတိထားကြတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့။ ဒီလိုနေရာက ကိုနန္ဒအောင် တပ်ခွဲ တာဝန် ယူရတဲ့ အပိုင်းမှာ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကို ပါဝင်လာတော့တာပဲ။ ဒီတော့လည်း ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် တပ်ခွဲမှူး ဦးစီး တပ်ခွဲရုံးအဖွဲ့ပဲ ဒီနေရာကို အပိုင်ယူထားလိုက်တာပေါ့။ ကျန်အပိုင်းတွေကို ညီငယ် တပ်စုမှူး ၂ ယောက်ရဲ့ တပ်စု ၂ စု၊ တပ်စိတ်တွေ ခွဲပေးထားလိုက်တယ်။ နေရာကိုတော့ မိုးတဖွဲဖွဲအောက်မှာ မျက်နှာပေါ်ကို တောဆောင်းဦးထုတ်ကနေ စိမ့်ပြီးမျက်နှာပေါ်ဖြတ်စီးကျလာတဲ့ မိုးရေနဲ့ချွေးရောရော ငန်ကျိကျိ အရည်တွေကို မကြာခဏ သုတ်ရင်း မိမိကိုယ်တိုင် ဦးစီးခေါင်းဆောင်တွေကို ခေါ်သွားပြီး ဘယ်နေရာမှ ဘယ်သူနဲ့ ဘာလက်နက်နေရာချ၊ ကျောဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘယ်သူတွေနေရာယူ၊ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်နှယောက်က အဲဒီကုန်း မှာနေ၊ ဟိုကွေ့မှာက ဘယ်ဆရာကိုထား၊ နမော်နမဲ့နိုင်မယ့် ရဲဘော်ကို ဆရာကြီး တွေနဲ့တွဲချ၊ အမိန့်မရဘဲ မီးမမွှေးဖို့၊ ငါးမပစ်ဖို့ (ငါးပစ်တယ်ဆိုတာက လမ်းဘေးတောထဲက ချောင်းကြိုချောင်းကြားဝင် ငါးအုပ်စုစု တွေ့တဲ့နေရာကို သေနက်ပြောင်း ထိုးချိန်ပြီး ၂ ချက်လောက်ကိုင်ထည့်လိုက်တာ၊ ခနနေတော့ ငါးတွေ တုန်းလုံး ပက်လက်နဲ့ ရေပေါ်ပေါ်လာတာကို အသာလေး ကောက်ထည့် ဟင်းစားအလွယ်ရှာနည်းပေါ့) သေနက်သံထွက်မှာကိုး။ ဒီတော့ တားရတာပေါ့။ ကိုယ်က အလစ်အငိုက်ယူပါတယ်ဆိုမှ။ အသံလုံမှ တော်ကာ ကြမယ်လေ။ အဲဒီရေထဲကိုချိန်ပြီး ပစ်ထည့်လိုက်တဲ့သေနက်ရဲ့ ပြောင်းဝက ရေမျက်နှာပြင်နဲ့ အနည်း ဆုံး ၁ ပေ လောက်ခွာရပါတယ်။ အဲဒီထက်နီးပြီး အတင်းကပ်ပစ်လိုက်ရင် သေနတ်ပြောင်းထွက်ရှိန် နဲ့ ရေက အပေါ်ကို ရိုက်ခတ်လာပြီး ရေက သေနတ်ပြောင်းကို အလုံးအရင်းနဲ့လာဆောင့်ရင် အပူအအေး ချက်ချင်းပြောင်း လဲမှု ကြောင့် သေနတ်ပြောင်း ကွဲတတ်ပါတယ်။
အခုလည်း ၆ ထပ်ကွေ့အလည်တည့်တည့်မှာ မိမိအတွက် ဘိကောင်းကောင်းလေးရတာနဲ့ နေရာချ၊ အစွန် ၂ ဖက်တွေကို စိတ်ချရတဲ့ ဆရာကြီးနဲ့ဆရာ တစ်ယောက် ၂ ဖွဲ့ခွဲချပေးလိုက်တယ်။ လှုပ်ရှားရှားလေး နည်းနည်း လုပ်ထားတာနဲ့ နာရီကလည်း စားနာရီထိုးခါနီး ( မနက် ၁၁ နာရီအချိန်) ရောက်လာတာနဲ့ ဗိုက်က အသံ မြည်လာပြီ။ ကဲ တပည့်ရေ စားမယ်ကွာပေါ့။ အဖွဲ့တွေလည်း ကိုယ်စီ မနက်စောစော ထ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းထုပ် ကိုယ်စီနဲ့ပါ။ မိုးက ဘယ်လိုမှ မတိတ်ဘူး။ ဝါးပင်ကြီး သစ်ပင်ကြီးတွေ ဘယ်လောက်ထူထူ မိုးရေက တော့ရွှဲရွှဲစိုပါပဲ။ ငါ့အတွက် တဲမထိုးတော့နဲ့ကွာ။ အိပ်ခါနီးမှ ပုခက်လေးဆင် အပေါ်က ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ လို့ တပည့်ကိုပြောထားတော့ အခု နားခိုဖို့ကျ အမိုးအကာက လိုလာပြန်ရော။ ချက်ချင်းဆိုသလို မိုးကာပါးလေးကို ထောင့်လေးခုမှာ ကြိုးစလေးတွေချည်လို့ ဝါးရုံကြားမှာအမိုးလုပ် အောက်က ရေစီးကာဖို့ ပတ်လည်ကို လက် ယက်မြောင်းလေးဖောက်လိုက်တယ်။ ဝါးပိုးလုံး ၂ ဆစ်၂ ဆစ်တုံးတွေကို အပေါက်ဖောက်ပြီး အလည်ကို ဝါးမာချောင်း လျှိုလိုက်တော့ ထိုင်စရာခုံဖြစ်သွားပြီလေ။ တပည့်က မိမိအတွက်ထမင်းပြင်ဆင်ပေးနေပြီ။ ကျန်တဲ့ အဖွဲ့တွေ ကင်းသမားက လွဲလို့ အားလုံး ထမင်းစားတော့ ကျန်အဖွဲ့လိုက်ကို လှမ်းပြီးအချက်လေး ဘာလေး ပြလိုက်တော့ လို့ခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့။ အခုလိုခါမျိုးတော့ တစ်ယောက်ထဲစားတာပေါ့။ ကျန်အချိန်ဆိုရင် တပ်ခွဲက အရာရှိအငယ်တွေနဲ့ ဆရာကြီးတွေ တစ်ခါတစ်ခါ စုစားရင်း အတွေ့ကြုံလေးတွေဖလှယ်ကြပေါ့။ မိုးရွာနေတော့ တစ်ခုကောင်းတယ် ဆေးဖို့ကြောဖို့ရေ ခပ်နေစရာမလိုဘူး။ အမိုးလုပ်ထားတဲ့ မိုးကာစ တစ်ဖက်ကို ခဏနိမ့် ထားပြီး ရေအိုင်လာတာနဲ့ လျှောချလိုက်ရုံပဲ။ ပန်းကန်ဆေးခွက်ဆေး အိုကေပဲ။
ကိုယ်ကတော့ ထိုင်ရင်းစားပေါ့။ ကျန်အဖွဲ့တွေကတော့ အခုလိုအချိန်ဆို မိုးတိုးမတ်တပ်စားတဲ့သူနဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကို မြေခင်း မိုးကာခြုံ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဖြစ်သလိုအမြန်စားလိုက်ကြတာကများပါတယ်။ ခဏနေတော့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်က ဝါးဆစ်ဘူး ခွက်လေးကိုင်ပြီးလာပေးတယ်။ ဗိုလ်ကြီး ရေနွေးပူပူလေး သောက်လိုက်ဦး ….တဲ့။ ကဲ မိုးဒီလောက်ရွာနေလည်း ရေနွေးပူပူကို ထမင်းစားချိန်လေးမှာ ရအောင်လုပ်လိုက်နိုင်သေးတယ်။ မိမိတို့စစ်သည်များအတွက်တော့ ထမင်းစားပြီးချိန် အခုလို ရာသီဥတုမိုးအေးအေးထဲမှာ ရေနွေးပူလေး တစ်ခွက် သောက်လိုက်ရရင် ခြေဖျားလက်ဖျားအေးနေတာလေးတွေ တစ်ခဏချင်း နွေးသွားသလိုခံစားရသလို နေသာ ထိုင်သာလည်းရှိသွားတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုတော့ပြီးသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ထမင်းစားချိန် ခရီးသွားချိန် ရေချိုးချိန်တို့ဆိုတာ အစိုးမရဘူးလေ။ ဘာဖြစ်စဉ်မှ မဖြစ်ရင်စိတ်အေးရတာပေါ့။ တစ်ခါတစ်ခါ အချိန်ကျလို့စားလိုက်ရပေမယ့် တာဝန်တစ်ခုလုပ်လိုက်ရသလိုပဲ စိတ်က မှတ်ယူထားတတ်မိတယ်။ အခုလည်း တပည့်ကျော် (၃/၄)ယောက် လက်ရွေးစင်ခေါ်ပြီး လက်စွဲတော် MA-3 လေးကို တင်းတင်း ဆုပ်ကိုင်ရင်း အောက်ဘက်ကိုဆင်းဖို့ပြင်ရတယ်။ ထမင်းစားပြီးချိန်ဆို ကင်းသမားအပါအဝင် အချို့သော ရဲဘော်လေးများက ထမင်းလုံးစီတတ်ကြတယ်လေ။ ဒီတော့ အဲဒီအချိန်ကို အလစ်ငိုက်ယူပြီး ကင်းစစ်ရင်း သူတို့ကို နိုးကြားနေအောင် လုပ်ပေးရင်း မိမိကတော့ နားချိန်မယူဘဲ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားပေး လူယောင် ပြပေးရတာပေါ့။ မိုးကရွာရွာ မြေသားတွေက ရေတွေစီးလို့ တောင်ဆင်းတောင်တက်တွေမှာ တဘုန်းဘုန်း ချော်လဲကြတာပေါ့။ ဘိုင်းကနဲချော်လေး လူက ပက်လက်ကားယားနဲ့ လျှော တိုက်ပါသွားကြပေမယ့် လက်က သေနတ်ကိုအပေါ်ထောင်လျက်ပဲ။ လူက လဲကျလို့ ရွှံ့ဗွက်စင် ရေတွေရွဲစေဦးတော့ သေနတ်တော့ အထိမခံဘူးလေ။………………..
shared by နေလွမ်းသူ at 2:48 PM0ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
တပ်ခွဲမှူးတွေ အဘခေါ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း IOညီလေးလာပြောတာနဲ့ တပ်ရင်းမှူးတဲနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ စုံအောင်စောင့်လိုက်ကြတယ်။ ခဏနေ တပ်ခွဲမှူးတွေစုံပြီဆိုတာနဲ့ သူ့ဘေးမှာအဖီဆွဲထားတဲ့ ဝါးစားပွဲ ခုံတွေရှိတဲ့အစည်းဝေးတဲလေးထဲမှာ အသင့်စောင့်နေတဲ့ တပ်ရင်းမှူးကို အလေးပြုပြီး ဝင်လိုက်ကြတယ်။ အနီးဆုံးက စီနီယာတပ်ခွဲမှူးကို လက်ထဲကကြေးနန်းမှတ်တမ်းကြီး ထိုးပေးရင်း စကားစပါတယ်။ တပ်ခွဲမှူးများအားလုံး နားထောင်ပါ လာမယ့် (--)ရက်နေ့မှာ ထီးထဘက်ကိုသွားမယ့် တိုင်းတပ်နဲ့အတူ အင်အားဖြည့်(ပေးအဖွဲ့)တက်လာမယ်။ အခုကတည်းက ကိုယ့်ညီတွေကိုတပ်ခွဲလိုက် လမ်းကင်းအပိုင်းတွေ ခွဲထားပေးချင်တာရယ် တိုင်း/တပ်မက ချပြလာတဲ့ သတင်းနဲ့ ညကခ လေးတွေပြောချင်လို့ ခေါ်လိုက်တာ…..ဆိုပြီး အစပြုလို့ နယ်မြေဒေသအခြေအနေ လိုက်နာရမယ့် ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန်တွေ တသီတစ်တန်း ကြီး ပြောပြ လာပါတော့ တယ်။ တပ်ခွဲလိုက် လူ/လက်နက် အခြေအနေ ကိုယ်စီ တင်ပြ တစ်ခြား လုပ်ချင်တာ လေးတွေ ဆွေးနွေးကြ၊ တပ်ခွဲလိုက်လမ်းအရှည်ကို တွက်ချက်ပိုင်းကြ၊ ဧရိယာသတ်မှတ်ကြနဲ့ အားလုံးပြီးစီး အိုကေပြီဆိုတာနဲ့ အေး ကောင်းပါပြီ တစ်ခြားသတင်းပို့စရာ မရှိရင် ပြန်နားကြတော့ ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ အလေးပြုပြီး ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။
ပေးအဖွဲ့လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုလူပျိုအရာရှိတွေမှအပကျန်စစ်သည်လူပျိုအစတပ်ရင်းမှူး အဆုံး အားလုံးကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ်စီနဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြမှာပေါ့။ အိမ်ထောင်သည်တွေ ဆိုတော့ နောက်တန်းမြေက ဇနီး သားသ္မီးတွေဆီက စာလွှာလေးတွေနဲ့အတူ ရှေ့တန်းမှာ စားဖို့ အကြော်အလှော်၊ကြိုက် တတ်တဲ့အခြောက်အခြမ်းလေးတွေ၊ ဆေးဝါးလေးတွေ ပါလာတော့မယ်လေ။ စစ်သည်လူပျိုတွေကျတော့ လစာ ငွေအချို့တစ်ဝက်/ နောက်တစ်ဝက်ကျ လစာမထုတ်ခင်ကတည်းက သူ့တပ်ခွဲလိုက်က လစာကြပ်ကို စက်နဲ့ ကြိုပြီး လှမ်းမှာထားကြတယ်။ လစာထဲကငွေနဲ့ ဘာလေးဝယ်ပေးပါ၊ ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတွေထဲက ငါးခြောက် လေး အကြော်လှော်လေးလုပ်ပေးပါဆိုပြီးမှာထားတော့ သူတို့အတွက်လည်း ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ပါလာကြပါတယ် ဆိုတော့ အားလုံး တက်ကြွစွာ မျှော်လင့်နေကြပြီလေ။
မောင်နန္ဒအောင် တို့ လူပျိုအရာရှိတစ်စု (IO/AQ) အပါအဝင် တပ်စုမှူးညီငယ်များကျတော့ ဘယ်လိုလုပ် အဲလို မှာလို့ရမလဲလေ။ လစာက ကိုယ့်ချက်လက်မှတ်နဲ့ကိုယ် အင်းဝဘဏ်မှာ ထုတ်ကြရတော့ လကုန်လစာထဲက ဖြတ်ပါပြောရအောင် တပ်ရင်းကိုမှ လစာမဝင်တာကိုး။ တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးခမျာ တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ဆိုလည်း တတ်နိုင်သေးတယ် အခုကျ သူ့မှာလည်း နောက်က မိန်းမဆီက တောင်းသုံးနေရတာမျိုးဆို ဘယ်လိုလုပ်ပါ့မလဲ။ အိမ်တွေကလည်း ပို့ပေးလို့ကမရ အားလုံးက တပ်နဲ့ဝေးရာတွေကချည်းပဲလေ။ မန္တလေးဘုရားကြီးနားက ညီငယ် တစ်ယောက်ပဲ သူ့အိမ်က တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးဆီထိ တကူးတကလာပို့ပေးတော့ ပေးအဖွဲ့လာတိုင်း ပါလာတတ် တာ။ အစားအစာက ထားတော့ အမောပြေအပန်းပြေ စာလေးဘာလေးကျလည်း တပ်တစ်တပ် ပေးတက်မယ့် အချိန်မှ စာကို တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးဆီ အချိန်ကိုက်ပို့ပေးနိုင်မှ ရှေ့တန်းထိပါလာတာမျိုးဆိုတော့လည်း ဘယ်သူမှ ကိုယ့် အိမ်ကတို့ ချစ်သူရည်းစားဆီကတို့ ဘာစာမှ ပါမလာနိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ ထူးကဲပြီးလည်း ပျော်ရွှင် မျှော်လင့်မနေကြတော့ဘူးပေါ့။
တပ်ခွဲလိုက် နယ်လမ်းပိုင်းလေးတွေ ပိုင်းယူလိုက်ကြတယ်။ မိုးတွင်းဆိုတော့ ဒုက္ခတော့ရောက်ဦးတော့မှာပေါ့။ မိုးကတဖွဲဖွဲ လမ်းကရေတွေစီး ရွှံ့ဗွက်ထဲချော်လဲတာမျိုး လူတွေလည်း မိုးကာခြုံထားပေမယ့် ကြွက်စုတ်လေး တွေ ဖြစ်လို့။ အဓိကအခက်အခဲက လမ်းဘေးတောင်ကုန်း စခန်းလေးတွေပေါ်မှာ အပေါ်ကမိုးဖွဲဖွဲ အောက်က မြေက စိုစိစိမှာ ထမင်းချက်ရတဲ့စစ်သည်တွေရဲ့ ပြသနာပါ။ ထင်းစ ဝါးစတွေက မိုးရေကြောင့် စိုတာထက်ကို နူးလို့။ ဒါလည်း မြေကျင်းလေးတွေတူး ဖိနပ်ကရာဘာခုံ အသားကို ဓါးနဲ့လှီးဖဲ့ယူပြီး မီး ရအောင်မွှေး ချက်ကြ ပြုတ်ကြတာပါပဲ။ လ္ဘက်ရည်ပူပူလေးတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ့်လမ်းပိုင်း အန္တရာယ်ကင်းအောင် အဖွဲ့ လိုက်ကို နေ့ညချထားပြီး လှုပ်ရှားပါထားလိုက်တော့တယ်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဟိုအပိုင်းကနေ ဒီအပိုင်းသွား လိုက် စစ်လိုက်ပေါ့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အလစ်လေးနဲနဲလေး ပေးလိုက်တာနဲ့ ရန်သူက လမ်းပေါ်တက်ပြီး မိုင်းထောင်သွားမှာလေ။ တပ်တွေကိုယ့်နယ်မြေ လမ်းပိုင်းက ဖြတ်သွားတဲ့နေ့မှ ဂျိမ်း ဆိုပြီးမိုင်းတစ်လုံးကွဲတာနဲ့ အဲဒီလမ်းပိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှူး ရှင်းပေဦးတော့။
ကိုယ်အသုံးမကျလို့ မိုင်းကွဲတာ မိမိတာဝန်ယူထားနေပါလျက်က ကွဲရလေချင်း ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း မကျေ မနပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ အခုလိုတာဝန်စယူပြီဆိုကတည်းက ရန်သူ(လူ)မပြောနဲ့ တောကြက်၊ တောကောင် တောင် အဖြတ်မခံတော့ဘူး။ ဘယ်အဖြတ်ခံမလဲနော် ဖြတ်တာတွေ့တာနဲ့ ပစ် ပဲ။ ဒါမှ အူစိုမှာလေ။ ခက်တာက ဒီလိုမိုးတွင်း ဘာတောကောင်မှ သိပ်မထွက်တော့လည်း မိုးရွာရွာထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း မျှစ် ဟင်းမျိုးစုံ ငရုပ်သီးရဲရဲ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းပူပူ ဝါးဆစ်ဘူးလေးရယ် ပေးအဖွဲ့နဲ့တပ်တွေ တက်လာမယ့် ရက်ကို စောင့်စားရင်း လမ်းပေါ်မှာအိပ်လိုက် ကုန်းစခန်းပေါ်အိပ်လိုက် လမ်းဘေးသစ်ပင်မှာ ပုခက်ဆင် အပေါ်မှာ မြေခင်တင်းရင်း မိုးစဲနေ့ မိုးရွာနေ့ တွေနဲ့ တောင်ခိုးတွေတလူလူအကြားမှာ တောင်တောင်သဘာဝနဲ့ အထာကျ တစ်ချက် မကျတစ်ချက် မိုးမှောင်နေ့တွေ အကုန်မြန်အောင် ရေတွက်ရင်း…………
shared by နေလွမ်းသူ at 5:52 PM0ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
shared by နေလွမ်းသူ at 12:53 PM 1 ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
shared by နေလွမ်းသူ at 10:52 AM 1 ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာရေးစကားပုံအရ ပျော်ရာမှမနေရ တော်ရာမှာနေရဆိုတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ တော်ရိရော်ရာ အကုန်ကိုလျှောက်ပြောင်းနေကြရသည်ပေါ့ဗျာ။ သံလွင်မြစ်ကြီးခြားလို့ ရှမ်းပြည်ရဲ့ အရှေ့စူးစူး မြောက်ဖက်နည်းနည်းကျတဲ့ မိုင်းယန်းမြို့နယ်အစွန်က တောင်ထိပ်စခန်းတစ်ခုမှာ စခန်းထိုင် ခဲ့ရပါပြီကော။ ပေါတာက ပေါပါတယ် တောင်ယာ စိုက်ခင်းတွေက ပတ်လည်ကိုး။ ကိုယ်သာ မတတ်တာ ဆရာကြီးဆရာများ စစ်သည်များက ရှမ်းစကားကိုကောင်းကောင်း တတ်မြောက်ထားကြတော့ တောင်ယာသွား အိမေ၊အိပေါ့ တို့ ပီအိုက်၊နောင်ရင်း၊ပီနန်း တို့နဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့ စားစရာပြတ်နေပြီ ဘာညာပေါ့။ စခန်း ပြန်လာလို့ကတော့ စုံနေတာပဲ။မုန်ညှင်း၊ကိုက်လန်၊ ကန်ဇွန်းဥ၊ အာတာလွတ်ဥ၊ တောင်ယာတောင်စောင်းက လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးအနှံ အကုန်စားရပါတယ်။ ဒါလည်းအဲလောက် ခံတွင်းမတွေ့မိဘူး။ ဒီမောင်က မြေပြန့်က လာတာဆိုပေမယ့် ဒါတွေက ဝယ်စားလို့ရနေတာကိုး။ မဆန်းသေးဘူးပေါ့။ မြေပြန့်မှာလည်း တောင်ယာမြေဟောင်းလောက်တဲ့အချိန် သစ်ပင် အုပ်နဲ့ စိုက်ခင်းဟောင်းအစပ် မြေနေရာပွပွတွေကနေ တူးဆွလို့ထွက်လာတဲ့ သစ်ဥလို သစ်ဖုဖုလိုလို လေးတွေ မလော့ ဆိုလား မနော့ဆိုလား သူတို့ကခေါ်တာ။ ကျွန်တော်ကတော့ မေ့ပြီ စားလို့ကောင်းတာပဲ မှတ်မိ တော့တယ်။ အဲဒီ ဥကိုရေစင်စင်ဆေး အစိမ်းစားလည်း ကောင်းမှကောင်း အရည်လေးတရွှမ်းရွှမ်းနဲ့။ ဟင်း အဖြစ်ချက်စားလည်း မိုက်တာပဲ ။ မြေပဲဆန်ဥ နုနုထွားထွားကို ထောပတ်အရသာ ပတ်ထည့်ထားသလိုပဲဗျာ။ အဲဒါစားပြီး အိပ်လို့အလွန်ကောင်းတာလည်း မှတ်မိနေသေးတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကလည်း တကယ်မိုက်တယ်။ ရွှေပဲသီးလိုလို စတော်ပဲလိုလိုအရွက် တို့ ကိုက်လန် မုန်ညင်း တို့ကို ကြော်စားရတာ။ ဒါများဘာဆန်းလဲ မေးစရာရှိတယ်။ တောင်ယာချင်းတူပေမယ့် သူက ဆန်းတာက။ ဘိန်းခင်း ထဲက ဟာမို့ပါ။ ဘိန်းခင်း ဆိုတာ ဘိန်းဖြူမွေးဖွားရာ ဇာတိ ဘိန်းပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ တောင်ယာ ဘိန်းစိုက်ခင်း ပေါ့ဗျာ။ ဘိန်းခင်းက ဘာလို့ရှိနေလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ တောင်ပေါ် ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာက အခါ လူမျိုး ၊ လားဟူလူမျိုးတွေက အခုချိန်ထိ တောင်ကုန်းစောင်း တစ်ခု ၄/၅ ဧကလောက်တော့ ဘိန်းကျဲကြတုန်းပါ။ ဒါမှ သူတို့ စားစရာရှိတာလို့ ဆိုပါတယ်။ လူသူ အရောက်အပေါက်လည်းနည်းတဲ့ တောင်ကုန်းဒေသတွေ ဖြစ်နေ တော့လည်း သူတို့မှာ အသိပညာလည်း နည်းလျက်ပေါ့ဗျာ။ (အဲဒီဘိန်းခင်းတွေ ဖျက်ခဲ့ရတာ လက်တောင် ပေါက်ပြဲခဲ့တာဗျ နောက်မှ ပို့စ် သတ်သတ်တင်ပါ့မယ်) ဘိန်းပင် ဆိုတာက အပင်ငယ်ငယ်မှာ အရွက် ကိုက်လံ/ ဆလပ် မျိုးနွယ်လိုပါပဲ။ သူက ဟို အသီးထွက်တော့မှ ဆလပ်ပင် အလယ်က ရိုးတံထွက်သလို အပေါ် ကိုရှည်ထွက်သွားပြီး အသီး သီးတာ။ အဲဒီဘိန်းခင်း အပင် ပေါက်စနလေးတွေကြားကို ဘိန်းစေ့ စကျဲကတည်းက ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပါ ထည့်ကျဲတာလေ။ ဘိန်းရဲ့ ထူးခြားချက်က သူက အခင်းထဲမှာ ရှိသမျှသော အပင်တွေဆီက အခါးဓာတ် ကိုစုပ်ယူပစ်ခြင်းပါ။ အဲဒီရဲ့ ရလာဒ် က ဘိန်းခင်းထဲက ရသမျှ အသီးအရွက်တွေက သာမန် တောင်ယာအခင်း ကိုင်းသီးနှံစိုက်ခင်းထဲက မည်သည့် အသီးအရွက်တွေအားလုံးထက် ပိုပြီး လက်ဆတ် နုမြစ်ချိုမြနေခြင်းပါပဲ။ မယုံမရှိနဲ့ဗျ ။ ကိုယ်တွေ့ဟေ့၊ ငါတွေ့ဟ လို့ အော်လိုက်မှာနော် ..... တကယ်ကို အရသာရှိတာ။ ဘိန်းရွက်ကတော့ နုစဉ်အခါမှာ မုန်ညင်းနဲ့အတူ ရောကြော်စားလို့ ကောင်းသေးတယ်။ ရင့်သွားတော့ ခါးသပ်သပ်လေးဖြစ်လာတာ။
တကယ့်ကို အရည်ရွှန်းနေတာဗျ။ ညစာကို ဘိန်းခင်းထဲက မုန်ညှင်းရွက်၊ ကိုက်လံ အရွက်စုံကြော်၊ရွှေပဲသီးနဲ့ ဖရုံညွန့် ဘူးညွန့် ဟင်းချိုလေးနဲ့ ထမင်းလေးစားလိုက်တိုင်း အမြဲတန်း လိုက်ပွဲကတော့ မောက်နေအောင် ထပ်ထည့်ခဲ့တာဗျ။ တကယ်။ ဘာအသားမှကို မလိုတာ။ လားဟူရွာခေါင်းဆောင်တွေ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကျားရိုးစိမ် အရက်လေး စွပ်လိုက်လို့ကတော့ အိုး ဖလန်းဖလန်းကိုထနေတာ (ဟီးဟီး ဘာလဲတော့မသိဘူး ဒီနေ့ အများပြောနေတဲ့စကား သုံးကြည့်တာ) ။ ညည ကင်းသမားတွေနဲ့အတူတူ ကတုတ်ကျင်းထဲမှာ ကန်ဇွန်းဥ ပြုတ်တစ်အိုးနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာပြောလို့။ နေ့လည်နေ့ခင်း အချိုတည်း ရတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးရှိသေးတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဘိန်းစေ့ လူတိုင်းမြင်ဖူးမယ် အဲဒါကိုတော့ ဟိုဗျာ ထိုးမုန့်စားရင် တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ အစေ့ သေးသေးလေးတွေ ဘိန်းစေ့ ဘိန်းစေ့ နဲ့ အဲဒါ ဟုတ်တယ် ဘိန်းပင် ဘိန်းသီးကထွက်တဲ့ ဘိန်းစေ့စစ်စစ်ပဲ။ သူက ဒီလိုစားရတာ။ ဘိန်းစေ့ကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီး အရင်လှော်လိုက်တာ။ ပြီးတော့မှ တပ်မတော် နို့ဆီလေးနဲ့ ဆီပူလေးနဲ့ လှိမ့်လိုက်တာ။ အိုး မွှေးနေတာပဲဗျာ အနံ့လေးကို။ ထမင်းလေးစားပြီး အချိုမတည်းရရင်ဖြင့် အစ်ကိုလဲရချေရဲ့ ဆိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ရလေအောင် အချိုလေးတည်း(တဲ)ပေးရတာကိုး။
ထိုစဉ်အခါက တပ်ခွဲမှူး ကျွန်တော့်ကို လိုလေသေးမရှိ တောင်ပေါ်စာလေးတွေ ချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ တပ်ခွဲရုံးက ထမင်းချက်စစ်သည် တပ်ကြပ်ဝင်းမြင့်ကတော့ ငှက်ဖျားရောဂါနဲ့ပဲ ကွယ်လွန်သွားတာ (၂) နှစ်ပြည့် တော့မယ် ဗျာ။ အရာရာ တိုင်းကတော့ အမှတ်တမဲ့ကနေ အမှတ်တရ ဖြစ်စေနေဦးတော့မှာပေါ့လေ။
(၂၀၀၆ ခုနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေလောက်ကပေါ့။)
shared by နေလွမ်းသူ at 10:29 AM 1 ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
@@@ By နေလွမ်းသူ (mmcyber ဖိုရမ်တွင် တင်ပြီးဖြစ်)
shared by နေလွမ်းသူ at 10:05 AM 1 ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
ဘုရားဝတ်ပြုပြီးတာနဲ့ လက်စွဲတော်ရေဒီယိုလေးကိုင်လို့ တဲအပြင်ထွက် မနက်ခင်း အေးအေးချမ်းချမ်း လေကောင်းလေသန့်လေး ရှူရှိုက်လို့ စခန်းကုန်း တစ်ပတ်လည်ကို တစ်ချက်ဝေ့ဝဲ ကြည့်လိုက်တယ်။ မီးခိုး လေးတွေ တလူလူနဲ့ အင်းပေါ့ ဒီအချိန်ဆို မောနင်းတီးလေးဖျော်လို့ ညကကျန်တဲ့ထမင်းလေးတွေ ဒယ်အိုးကင်းပူ ဆီပါးပါးလေးတိုက်လို့ ဆနွင်းပါးပါး ဆားများများနဲ့ (ဆားကတော့ အခဲလိုက်တောင် ပါတယ်) ချွေးထွက်များလို့ ဆားများများ စားခိုင်းထားရတယ်။
ငှက်မျိုးစုံအော်သံ ဝါးရွက်တွေ လေအဝေ့ ထွက်လာတဲ့အသံ တကယ့်ကို သာယာပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်တပ်ခွဲရုံး ထမင်းချက်(ချက်ကြီး) အာပီဂျီ တင်ငွေ ထမင်းကြော် ပန်းကန်လေးနဲ့ လက်ဖက်ရည် ခွက်လေး ကိုင်လို့ တဲရှေ့က ဝါးစားပွဲလေးပေါ် လာတင်ပေးတယ်။ 'ဗိုလ်ကြီး' လို့ နောက်ကနေခေါ်တာနဲ့ လှည့် မကြည့်ဘဲ အေးထားခဲ့လေကွာ ဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ငြိမ်ပြီးရပ်နေတာနဲ့ ပြောတပည့်ကျော် မင်းတစ်ခုခု ပြောမလို့မို့လား ဟုတ်တယ်ဗိုလ်ကြီး တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး …(အဲဒီလိုတစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး တွေပဲ ရင်ထိတ်ရတာ ဘာပြသနာဖြစ်ပြန်ပြီလဲပေါ့) တပ်စိတ်တွေမှာ ရိက္ခာနည်းကုန်ကြပြီ …. ဟေ တစ်နေ့က ငါမေး တော့ တစ်ပါတ်လောက်ရသေးတယ်ဆို တို့ခွဲရုံးမှာရော ။ ဟုတ်ကဲ့ ခွဲရုံးကို လာချေးလို့လည်း ဆန်နဲနဲစီနဲ့ ဆီ မျှပေးလိုက်သေးတယ်.. တစ်ချို့ဆို မနက်ထမင်းကြော်ကို မစားကြ တော့တာ….တဲ့။ ကဲ ဇာတ်လမ်းကစပြီ။
အဲဒီ့ရိက္ခာ ပြဿနာက တကယ့်ကို ပြဿနာ တစ်ခြားနေရာတွေ အကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် အခုလို မိုင်း အန္တရာယ်များတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် တောထဲရှေ့တန်းက ခေါင်းခဲစရာတစ်ခုပါ။ အခွင့် မရဘဲ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ သွားလို့မရ သလို သွားတာနဲ့ မိုင်းဖြစ်စဉ် တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ် တစ်ခုခုဆိုတာနဲ့ ဖြေရှင်း ပေတော့။ ရန်သူ ဘယ်နှယောက် မိမိဘယ်လောက်ပေါ့။ အခုလည်း ရိက္ခာထုတ်ထားဦးမလား စစ်ကြောင်းမှူးမေး တုန်းက လောက်သေးတယ်။ အခုမလောက်တော့ဘူးဆို ဘယ်ကောင်းမလဲပေါ့။ ကဲ ခေါ်ကွာ ဆရာကြီးတွေ …. ။
သူတို့မလာခင် တဂွီဂွီမြည်နေတဲ့ ဗိုက်ထဲကို Army Tea လေး လောင်းချ လိုက်တယ်။ အင်း လ္ဘက်ရည်ကတော့ နို့ရောင်ရောရော အရသာရှိရှိပဲ။ ဒါကိုလည်း တပ်ခွဲမှူး လုပ်တဲ့ အရာရှိတွေက သောက်ပြီး လျှာဖျားမှာ အရသာကို သေချာစစ်ဆေးရတယ်။ အရသာကို ခံချင်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အချိုအရမ်းပေါ့ နို့ဆီအရောင်က ပါနေပေမယ့် ဒါ သေချာတယ် သကြားပြက်နေပုံ။ အရောင်က လုံးဝ အကျရည်ရောင် ကျစိမ့် အရောင်ဘက်များပြီး အချိုဓာတ်က ပုံမှန်ဆိုရင် နို့ဆီ နည်းနေလို့ ချွေတာနေပြီ။ နောက် အကျရည်အရောင်လုံးဝ မပါတာမျိုး နွားနို့ရောင် အချို ပေါ့ပေါ့ဖြစ်လာပြီဆို သေချာပါပြီ အင်း အချိုခြောက်နဲ့သကြားပါးဆို မရှိသလောက်ပေါ့…… ဒီလိုမျိုးလေးတွေ။ (ပြောရင်း ရန်ကုန်က Lucky Seven (၈မိုင်ကားဂိတ်နားက) လ္ဘက်ရည်ကိုတောင် လွမ်းလာပြီ.. လမ်းကြား လေးထဲမှာ)
ခဏကြာတော့ ဆရာကြီးတွေနဲ့ အတူ တပည့်ကျော်ပြန်ပါလာတာနဲ့ ရော့ ချက်ကြီး ထမင်းကြော် ပန်းကန် ပြန်ယူ သွားတော့ မစားရသေးတဲ့ ရဲဘော်တစ်ယောက်ကို ကျွေးလိုက်။ တီးတော့ထားခဲ့ ( ဟုတ်တယ် လေ ဒါက ထမင်း ကြော်ထက် အရေးကြီးတယ်) ကဲ ဆရာကြီး ဆရာ့ဆရာကြီးများ ( နဲနဲ ရွဲ့သံလေးပါလာတယ် တင်းနေတယ် ပေါ့လေ) ဟိုနေ့က စစ်ကြောင်း ၁ ရုံးက ၃၂ ကိစ္စ မေးလာလို့ ကျွန်တော် အကုန်ခေါ်မေးတော့ လောက်သေး တယ် အေးဆေး ဗိုလ်ကြီးဆို ။ အခု စနေပြီလေ ဇာတ်လမ်းက။ ဒါတောင် ဘယ်သူမှ သတင်းလာပို့တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ (ကိုယ့်ဘာသာသိတဲ့အထာနဲ့ အဟဲ အမှန်က တပည့်ကျော်ပြောလို့ ဒီလိုပဲ အရာရှိပါဆို အရာရာ သိရှိထားရမယ်လေ)။
ထမင်းဝအောင် မစားရတော့တဲ့ တပ်စိတ်က ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေပြီလဲမသိဘူး။ ဆရာကြီးတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ သွားမယ်လာမယ်ဆို ဗျူဟာကိုပြောရ စစ်ကြောင်းရုံးကို သတင်းပို့ရ ခွင့်ပြုချက်မရ ဒီတိုင်း ငုပ်တုတ်နေပါဆို ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။ ဘာနဲ့သွားစားကြမလဲ ဟင် … ရိက္ခာနည်းနေတာကို တို့ ဗိုလ်ကြီး ဆရာကြီးတွေက ဒီလိုပဲ ကြည့်နေတယ်လို့ အောက်က တပည့်တွေ ထင် ကုန်ဘယ်လို လုပ်မလဲ ။ ခေါင်းဆောင် လုပ်နေတဲ့ ဆရာကြီးတို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်မှာသွား သုံးစားမလဲ ကဲ ပြော ကြလေ … ဆိုတော့ မလှုပ်ကြဘူး။ ဒီလိုပဲတပ်မတော်မှာက ကိုယ့်အရာရှိ စိတ်တိုပြီဆို ကုပ်နေတယ် ။ မကုပ် ကြည့်ပါလား တုတ်ခံရမှာပေါ့။ စစ်ကြောင်းမှူးက ခွင့်ပြုတယ်ထား။ ဗျူဟာက ခွင့်မပြုရင် အဲဒါက ပြဿနာ။ နောက်မှ ရိက္ခာစားတက် အဲဒီမှာ ရိက္ခာတွေ မထုတ်ဖြစ်ဘဲ လိုစားပြနေအခက်။ ရှင်းတော့ အဲဒါကို ။ ဆရာကြီးအကုန် ကျွန်တော့်ထက် အဲဒီကိစ္စ ပိုသိကြမှာပါ။ တပ်မတော်မှာ အထူးသဖြင့်ရှေ့တန်း ရိက္ခာကို စားစမ်း စားလို့ကုန်တာ။ နှစ်ဆထုတ်ပေးတယ်။ တကယ်လည်း ပင်ပန်းလို့ ။ ပိုစား(ရိက္ခာကို ပိုထုတ်မိသွားတဲ့ အပါတ်)၊ လိုစား(ထုတ်ယူစားရမယ့်ဟာထက် လျော့နည်းပြီး ထုတ်စားတာ) ပိုစားကဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် လိုစားဆို လာတော့မှာလေ။ စစ်သည်တွေကို ရိက္ခာထုတ် မပေးဘူးလား။ ဘာနဲ့စားနေလဲ ဒီအကြားထဲ ရွာတွေကရနေလို့လား ပိုက်ဆံတွေပေါနေလို့ ဝယ်စား နေတာလား မင်းတို့က ကိုယ့်ရိက္ခာကို ထုတ်မစား ကြရအောင် … ဆိုလာရင် ကဲ ရှင်းလေ ။ ဘယ်သူရှင်းမလဲ ? ဆိုတော့မှ ဟုတ်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီးတဲ့ ။
ဆရာကြီး CQ က (အဲဒီ CQ က စားရေးသောက်ရေးတာဝန်ခံပဲ ဆိုပါတော့) အခုမှ ဟုတ်မနေနဲ့ လုပ် မနက်ဖြန် ဆရာကြီး ၂ ယောက် လက်ရွေးစင် ၂ စိတ်လောက်ထုတ် အကုန်လက်နက်ငယ်ကိုယ်စီ အကြီး ၂ ခုနဲ့ ရိက္ခာသွား ယူဖို့ အခုပြီးတာနဲ့ လူ တစ်ခါထဲ ထုတ်။ ယောင်တောင်တောင် ငေးတေးတေး နေအိမ်လွမ်းဆွတ်မိန်းမတမ်းတတဲ့ ကောင်တွေ ခေါ်မသွားနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် မာမာချာချာတွေ ရွေးခေါ်သွား။ ထွက်ခါနီး ဆရာကြီး CQ သတင်းလာပို့ ။ ကဲ ဘာမရှင်းတာရှိလဲ မရှိပါဘူးဗိုလ်ကြီး … (မနားတမ်းပြောထည့်လိုက်တာ အသက်တောင် မနည်းရှူရတယ်)
တခုသတင်း ပို့ချင်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီး …….. ဟုတ်ပြီ ပြောဆရာကြီးဒိုးလုံး (သူ့နံမည်အရင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး သူက ဒိုးလုံး crazy တဲ့လေ အဲဒါကို အကြောင်းပြုလို့ တပ်ကြပ်ကြီးဒိုးလုံး ဖြစ်နေတာ) ။ ဆရာစိုးမြင့်ထွန်း ကိုခေါ်သွားချင်တာ သူက တုတ်ကွေးဖျား ဖျားလို့ ဆေးတိုက်ပြီး သိပ်ထားတယ်။ ဟာ ဖြစ်ရပြန်ပြီ အဖျားကြီးလား (မေးလိုက်မိပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျိန်ဆဲလိုက်မိတယ် ငါနှယ်နော် အညာစကားနဲ့ သွားပြောမိတယ်လို့ …နို့ ကျွန်တော်က အညာသားလေးလေ.. ) ကိုယ်နဲနဲပဲ ပူတယ် ဗိုလ်ကြီး ထမင်းရေပူပူနဲ့ ဆေးတိုက် ထားပါတယ်…တဲ့ ဆေးတပ်သားက ဘာပြောလဲ … ဘာမှတော့ပြောမသွားဘူး ဟာ ဒီကောင် ခေါ် မောင်ဆေးတပ်သား (ဆေးသင်တန်းတတ်ပြီးသား ဒုတပ်ကြပ်တစ်ယောက်ပါ) ။။ တုတ်ကွေးဖျားဆိုပဲ သိသလို လိုနဲ့ အမယ် ငှက်ဖျားဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကဲ… ဟုတ်တယ်လေ တပ်မတော်မှာ ငှက်ဖျားဆေးတွေ ထုတ်ပေး ထားတာ။ ငှက်ဖျားနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်လို့ကတော့ ဆေးမသောက်သူမှာ တာဝန်ကိုး။ နေပါဦး ဒီကောင် မနေ့က ဘာတွေ အစားမှားသေးလဲ မှိုတွေဘာတွေ စားလို့လား …. ဆိုတော့ မစားဘူးဗိုလ်ကြီး တောင်ပိန္နဲရွက်နဲ့ ပဲဟင်းပဲ စားတာ။ …. ဟုတ်မှာပါ ကိုယ်တောင် တောင်ပိန္နဲရွက်နုလေးနဲ့ မြောက်ဥ ၊ ကုလားပဲဟင်းလေးနဲ့ မြိန်နေရတာ။ အင်း ဖျားတယ်နာတယ် ဆိုလို့ နောက်နေ့ တပည့်တွေ သေချာထပ်လိုက်ကြည့်ဦးမှပါ ……. တော်ကြာ အဖျား ကူးကုန်မှ စခန်းတစ်ခုလုံး ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ် …………….. ဟူးးးးးးးးးးးးးးး ဒီရက်စွဲတွေ ဒီနေ့ရက်တွေ။
shared by နေလွမ်းသူ at 2:57 PM 1 ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ။ အားလုံး သက္ကရာဇ် ၂၀၁၀ နဲ့အတူ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ခံစားမှုအသစ်အသစ်၊ ဘဝမှာ မကြုံရဖူးသေးတဲ့ ရင်ခုန်လှိုက်ဖိုမှု အသစ်တွေနဲ့အတူ ထာဝရအေးချမ်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေသားဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို အခုဒီ ဆိုက်ဒ်လေး လုပ်ဖြစ်အောင် ဖိအားပေး သူကိုယ်တိုင်လည်းကြည့်ရှုပေး ကူညီပေးတဲ့ ညီမထက်ရည်မွန်အိ၊ စာရေးဖို့ အမြဲအားပေး လိုတာမှန်သမျှကူညီပေးခဲ့တဲ့ ညီမဝါဝါ၊ အရင် ကြိုးမဲ့စွန်ရဲ့ စီဘောက်စ်ကနေ စာပြန်ရေးဖို့ အမြဲတိုက်တွန်းတတ်တဲ့ မရွှေဖူး(Spore)၊ ကိုအောင်မျိူးကျော်(Australia)၊ ကိုနိုင်၊ ကျွန်တော်ရဲ့ နေလွမ်းသူ မှစပြီး နေလွမ်းသူ-၃ အထိ အမြဲလိုက်ပါအားပေးခဲ့တဲ့ အစ်မ မမေဦးခင်နှင့်ကျန်ပရိတ်သတ်အားလုံး နယ်သား တွေနဲ့အတူ နယ်သူ မိစိမ်း(Spore) အားလုံးအားလုံး အားပေးနေမှုကို လေးစားသောအနေနဲ့ လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်ဝါသနာအထုံကို မစွန့် လွှတ်နိုင်သေးမှုကြောင့်လည်းကောင်း ဒီ စာမျက်နှာလေးကို ဖန်ဆင်း အသက်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး စိတ္တသုခ၊ကာယသုခ နှစ်ဖြာသောသုခနဲ့ ထာဝရပျော်မွေ့ကြ ပါစေ သားဗျာ။
(နာမည်များဖြင့် မဖော်ပြခဲ့သော ကျေးဇူးရှိသူများ၊ ကျွန်တော် ရေးသားသော စာများကို လာရောက်ဖတ်ရှု အားပေး ကြတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးကို တင်ရှိပါတယ်)
shared by နေလွမ်းသူ at 2:47 PM3ယောက်က comments ချန်ထားပါတယ်